KDE - Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
I-KDE Gear 22.04.1 ifika ukulungisa ngaphezulu kwe-100 bugs kwiseti ka-Epreli ka-2022
Iprojekthi ye-KDE ikhuphe i-KDE Gear 22.04.1, olu luhlaziyo lokuqala lokulungisa ii-bugs kwi-apps ngo-Epreli ka-2022.
I-KDE iqhubeka isongeza izinto ezintsha zePlasma 5.25 ezayo, njengephaneli entsha "edadayo".
Kungekudala ngaphambi kokuba ikhutshwe, kodwa i-KDE isebenza ukongeza amanqaku amatsha kuguqulelo olulandelayo lwedesktop yayo, iPlasma 5.25.
IPlasma 5.24.5 ifika ilungisa iibhugi ezininzi, phakathi kwazo kukho ezininzi zeWayland
I-Plasma 5.24.5 ifikile ukuze iqhubeke nokulungisa iimpazamo kuluhlu lwe-LTS esilufumene kwiinkqubo zokusebenza ezifana noKubuntu 22.04.
I-KDE ithumele inqaku leveki elichaza ukuba bazakuqala ukufaka isoftware kwiQtQuick ukuphucula ukungaguquguquki kwe-UI.
I-KDE iyawuphucula umxholo wehlabathi, kwaye umbala we-accent unokukhethwa ngokuzenzekelayo ngokusekelwe kwiphepha lodonga. Iindaba kule veki
I-KDE isebenzela ukuphucula yonke imibala yedesktop yakho, kwaye kungekudala uza kuba nakho ukukhetha umbala wakho wonyuso olusekwe kwimvelaphi yakho.
I-KDE Gear 22.04 ifika ineempawu ezintsha zeseti ye-apps, kunye nokubandakanywa kweKalenda entsha kunye ne-Falkon eyaziwayo kunye ne-Skanpage.
Iprojekthi ye-K ikhuphe i-KDE Gear 22.04, i-suite ka-Aprili ka-2022, eneempawu ezintsha kunye nolongezo olutsha.
I-KDE iyaqhubeka nokuphucula i-touchpad gestures kunye ne-Wayland ngelixa ulungisa ii-bugs zemizuzu eli-15. Iindaba kule veki
I-KDE iyaqhubeka nokusebenza ekuphuculeni iWayland, kwaye izijekulo sesinye sezizathu zokwenza njalo. Bakwaqhubeka nokulungisa iimpazamo.
KDE debuts inguqu ngokutshintsha iskimu sombala, phakathi kweendaba kule veki
I-KDE ipapashe ungeno lwayo lweveki kwinto entsha, kwaye kukho enye ebalaseleyo: inguqu xa utshintsha udweliso lombala.
I-KDE isebenzela ukuphucula amava omsebenzisi kwizixhobo eziguqulekayo, ngeyona ndlela ifikelelekayo yethebhulethi.
I-KDE Plasma iya kusebenzisana ngcono kunye nezikrini ezichukumisayo ezivela kwi-5.25, kunye nezinye iindaba ezisilungiselele zona.
I KDE iqhubele phambili eminye imiba emitsha, efana nentshukumo yokuchukumisa ukwenza imboniselo yangaphezulu izakusebenza kakuhle kakhulu.
Izicwangciso ze KDE KRunner zizimele, kwaye iprojekthi ineebugs ezininzi zemizuzu eli-15 phantsi kolawulo
I-KDE ipapashe inqaku leveki apho baqaqambisa ukuba baye balungisa iibugs ezimbalwa zemizuzu eli-15, kodwa banezinye ezininzi endleleni.
I-KDE ithembisa usetyenziso olungcono, kunye nophuculo lwekona kunye ne-multi-cursor
KDE ilungiselela uyilo oluneekona ezincinci, kunye nezicelo ezingcono eziya kuba nemveliso ngakumbi.
I-Plasma 5.24.3 ibuyela ukulungisa iimpazamo ezininzi kunokuba bekulindelwe kuthotho olubonakala luqala kakuhle
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.24.3, inqaku lesithathu lohlaziyo apho baye balungisa iibugs ngaphezulu kunokuba bebelindele.
I-KDE Gear 21.12.3 ifika ilungisa iibhugi zamva nje kwaye ilungiselela uhlaziyo olukhulu olulandelayo
I-KDE Gear 21.12.3 ifikile njengenqaku lokugqibela lohlaziyo lwe-apps ye-KDE eseti kaDisemba ka-2021 ukulungisa iibugs zamva nje.
I-KDE iyaqhubeka nokulungisa iimpazamo kwiPlasma 5.24, ngaphandle kokukholelwa ukuba yonke into ihambe kakuhle kakhulu, phakathi kwezinye iindaba.
I-KDE iqale ukusebenza nzulu ukulungisa iziphene ezifunyenwe kwiPlasma 5.24, apho baqinisekise ukuba yonke into ihambe kakuhle.
I-Plasma 5.24.2 ilungisa iziphene ezimbalwa kunoguqulelo lwangaphambili
I-KDE ikhuphe i-Plasma 5.24.2, uhlaziyo lwesibini lolondolozo kolu luhlu olulungise iibugs ezimbalwa kuneyangaphambili.
I-KDE iqala ukugxila kwiPlasma 5.25 kunye nezicelo zika-Epreli olandelayo. Utshintsho osebenza kulo
Iprojekthi ye-KDE, ngelixa iqhubeka nokulungisa i-5.24, iqalile ukugxila kwi-Plasma 5.25 kunye ne-KDE Gear 22.04.
IPlasma 5.24.1 ilungisa inani lebugs kuthotho i KDE enebhongo ngayo
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.24.1, uhlaziyo lokuqala lokugcinwa kolu luhlu olulungise inani leempazamo.
I-KDE ithi kwiPlasma 5.24 ikhupha yonke into yahamba kakuhle, kwaye iKonsole ingabonisa .sixel imifanekiso
I-KDE iyavuya ngokukhutshwa kwePlasma 5.24 apho yonke into ihambe ngcono kunokuba bekulindelwe. Ukongeza, bayaqhubeka nokusebenza kwiimpawu ezintsha.
IPlasma 5.24 ifika inombono omtsha, isifundi seminwe nokunye okuninzi
IPlasma 5.24 luhlaziyo olutsha olukwimeko-bume yomzobo ye-KDE, kwaye iza nezinto ezintsha eziphawulekayo ezinje ngombono omtsha.
I-KDE iqala ngoyilo ngokutsha lwe-Discover kwaye ilungiselela izinto ezininzi ezintsha zePlasma 5.24
I-KDE ibhengeze ukuba izakuqala ukuyila ngokutsha iziko layo lesoftware, Fumanisa, phakathi kwezinye izinto ezintsha eziza kufika kwiPlasma 5.24.
I-KDE Gear 21.12.2 ifika neenguqu ezingaphezulu kwe-100 ukuphucula iseti yeapps ukusuka ngoDisemba 2021.
Isixhobo se-KDE 21.12.2 yinqaku lesibini lohlaziyo lwe-app ye KDE emiselwe inyanga kaDisemba 2021. Ifikile ukulungisa iziphene.
I-KDE inePlasma 5.24 phantse ilungile, kwaye inani leebhugi zemizuzu eli-15 lehlile laya kuma-83 kule veki.
I-KDE ibeka izinto zokugqibela kwiPlasma 5.24 kwaye iyaqhubeka nokulungisa i-bugs yemizuzu eyi-15 ukuphucula uzinzo jikelele.
I-KDE isithembisa uzinzo ebesilulindele, kunye nezinye izinto ezintsha, phakathi kwazo kwakhona ezininzi ze-Wayland
KDE iqalise inyathelo lokuqala ukwenza isoftwe yayo izinze ngakumbi. Injongo kukuphelisa iziphene esizibona xa siqala isixhobo.
I-KDE ikhuphe i-Beta ye-Plasma 5.24, kwaye izisela iindaba ezinjengokukwazi ukuqwalasela ukuba yeyiphi isoftware evula i-tel: // kunye ne-geo: // amakhonkco.
I-KDE ikhuphe i-Plasma 5.24 Beta, inguqulelo elandelayo yendawo yayo yomzobo, kwaye isixelele malunga nezinye izinto ezintsha abasebenza kuzo.
I-thumbnails yomphathi wemisebenzi ye KDE iyakubonisa isilayidi sevolumu, kunye nezinye izinto ezintsha kule veki.
Enye yeendaba i-KDE iqhubele phambili kule veki yeyokuba ii-thumbnails zomphathi womsebenzi ziyakubonisa isilayidi sevolumu.
IGear ye-KDE 21.12.1 iFika ine-150+ yoLungiso ngo-Disemba ka-2021 iSeti ye-App
Ngoku iyafumaneka i-KDE Gear 21.12.1, inqaku lokuqala lohlaziyo lwe-suite yesicelo se-KDE kaDisemba 2021.
I-Plasma 5.23.5 ifika njengenguqulo yokugqibela yolu chungechunge kunye nokuphuculwa kwe-Wayland kunye ne-Kickoff, phakathi kwabanye.
Ngoku iyafumaneka iPlasma 5.23.5, inguqulelo ephawula ukuphela komjikelo wobomi bePlasma 25th Anniversary Edition.
I-KDE iyasithembisa ukuba kungekudala siza kukwazi ukusebenzisa iDolphin njengengcambu, phakathi kwezinye izinto ezintsha abavale ngazo ngo-2021.
I-KDE ibhengeze utshintsho kwi-PolKit kunye ne-KIO ezakusivumela ukuba sisebenzise ezinye ii-apps ze KDE njengengcambu, phakathi kwazo iDolphin eme ngaphandle.
I-KDE ayiyeki ngeKrisimesi kwaye iqhubela phambili ukubuya kweFlip Switch kwiPlasma 5.24
Indlela esibona ngayo izicelo ezivulekileyo ziya kutshintsha kwakhona kwi-KDE Plasma 5.24, ngaphezu kokukwazi ukuprinta ngeSamba.
I-KDE Plasma 5.24 iyakusivumela ukuba siqwalasele nawuphi na umfanekiso njengemvelaphi, kwaye iyaqhubeka nokuphucula iWayland
I-KDE iqhubele phambili uphuculo oluninzi lweeseshoni zeWayland, phakathi kwezinye ezinje ngokuba sinokuqwalasela imali ngonqakrazo oluchanekileyo.
I-KDE yenza i-Dolphin kunye ne-Ark zihambelane kwakhona, kwaye yazisa uphuculo oluninzi lwe-Wayland kunye nabanye kwi-systray, phakathi kolunye utshintsho oluzayo.
I-KDE ikhuphe incwadana yeendaba yeveki kwaye kukho kwakhona ezininzi ezenza izinto zibengcono xa usebenzisa iWayland.
Umboniso we KDE uzakusivumela ukuba sichazele uthango ngqo kwisaziso
I KDE ineendaba eziphambili zexesha elizayo, ezinje ngokuba siyakukwazi ukuchaza umfanekiso wekhusi ngokuthe ngqo kwisaziso esikwindlela yetreyi.
IPlasma 5.23.4 ifika nebhetshi entsha yokulungiswa koshicilelo lwesikhumbuzo seminyaka engama-25
Iprojekthi ye-KDE ikhuphe iPlasma 5.23.4, enezilungiso ezingaphambili zoshicilelo lwesikhumbuzo seminyaka engama-25 yokusingqongileyo kwemizobo.
I-KDE iphela ngoNovemba ilungisa iibugs ezininzi kwisoftware yayo
Iprojekthi ye-KDE ithathe i-throttle kancinane kwaye igxile ekulungiseni iibugs ezininzi kwiPlasma, izicelo, kunye nezakhelo.
I-KDE ijonge kwi-GNOME ukongeza uphuculo, kunye nolunye utshintsho oluzayo kwixesha elizayo
I-KDE ilungiselela uphuculo kwindlela imboniselo yefestile evulekileyo evezwa ngayo, kwaye kule veki sivile malunga nesekwe kwi-GNOME.
IPlasma 5.23.3 ifika ilungisa iziphene eWayland kunye nentwana yayo yonke into
IPlasma 5.23.3 ifikile njengohlaziyo lwesithathu lokugcinwa koHlelo lweMinyaka engama-25 ukucokisa ngakumbi olu ngcelele.
I-KDE ithembisa uzinzo olungakumbi, iincwadi ezineenkcukacha ezininzi, kunye nezaziso ezicacileyo ezibalulekileyo
I-KDE isebenzela ukwenza isoftwe yayo izinze ngakumbi, ngelixa ikwayila izixhasi ezifana neefolda ezininzi ezinee-iyikhoni zosetyenziso.
I-KDE Gear 21.08.3 ifika njengohlaziyo lokugqibela kolu thotho ukulungisa iibhugi ezingama-74
I-KDE Gear 21.08.3 ifikile njengohlaziyo lwesithathu kunye nolokugqibela lokugcinwa kolu luhlu kunye neenguqu ezingama-74 zizonke.
Umbala we-accent uyeza kwiifolda ze-KDE / Plasma + Breeze, kunye nezinye izinto ezintsha esiza kuzibona kungekudala.
I-desktop ye-KDE iyakuhlonipha ngakumbi umbala wogxininiso kwaye izakufikelela kwakhona iincwadi, phakathi kwezinye izinto ezintsha eziya kufika kwixesha eliphakathi.
IPlasma 5.23.2 ilapha ukuqhubeka nokulungisa iziphene zohlelo lweminyaka engama-25
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.23.2, inqaku lesibini lohlaziyo lohlelo lweminyaka engama-25 olufikayo ukuqhubeka nokulungisa iziphene.
I-KDE Plasma 5.24 iya kufumana inkxaso yeminwe yeminwe, kunye nezinye iindaba ezizayo
KDE isebenza ekongezeni inkxaso yoshicilelo lweminwe kwidesktop yayo. Sinokuzisebenzisa kunye nomyalelo we-sudo.
IPlasma 5.23.1 ifika kunye nolungiso lokuqala lwenqaku lama-25
IPlasma 5.23.1 ifikile nje kwiintsuku ezintlanu emva kokukhutshwa kwangoko ukuqala ukulungisa iibugs kuVavanyo lwe25th Annivers.
NgePlasma 5.23 esele inathi, i-KDE ijolise ekuphuculeni izinto ukuze zikhutshwe, iPlasma 5.24.
IPlasma 5.23, ngoku iyafumaneka kushicilelo lwesikhumbuzo sama-25 kunye nomxholo omtsha kunye nezinye izinto ezintsha
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.23, iyilibazisa ngeentsuku ezimbini ukuze ihambisane nesikhumbuzo seprojekthi ye-25.
Iprojekthi ye-KDE isixelele ngezinye zezinto ezintsha esebenza kuzo, kwaye iPlasma 5.23 lushicilelo lwesikhumbuzo sama-25.
I-KDE Gear 21.08.2 ifikile njengohlaziyo lwesibini lokugcinwa kweapp ka-Agasti isetiwe ngaphezulu kwe-100 yokulungisa kunye notshintsho.
Uluntu lwe KDE luyaqhubeka nokusebenza ukuphucula iPlasma 5.23, isikhumbuzo seminyaka engama-25 sokukhutshwa ngenxa phakathi ku-Okthobha.
I-KDE ikhuphe uninzi lwezinto ezintsha esebenza kuzo kwaye uninzi luya kufika ngePlasma 5.23 okanye sele ikwiPlasma 5.24.
Iprojekthi ye KDE iqinisekisa ukuba iyaqhubeka nokusebenza ukuphucula iiseshoni zeWayland, kunye nolunye utshintsho kwi desktop.
I-KDE ijolise ekubekeni indawo yokugqibela ePlasma 5.23 ngotshintsho olufana nolu luhlu
NgePlasma 5.23 phezulu, i-KDE ijolise ekwenzeni yonke into eya kubetha imeko yemizobo isebenze ngokufanelekileyo.
I-KDE iyiphucule kakhulu i-Wayland kwezi veki zidlulileyo kwaye inokuba sele isetyenzisiwe mihla le
UNate Graham, ovela kwi-KDE, uqinisekisa ukuba benze inkqubela phambili enkulu eWayland kangangokuba sele eyisebenzisa kwimihla yakhe, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo.
I-KDE Gear 21.08.1 yazisa ngophuculo oluninzi e-Elisa, iDolphin, iSpectacle kunye nezinye iinkqubo zeprojekthi
I-KDE Gear 21.08.1 ifikile njengokuqala kohlaziyo lwendawo ye-Agasti ka-2021 yokuseta ukulungisa iibugs zokuqala
IPlasma 5.22.5 ilungisa i-bugs zamva nje kolu ngcelele kwaye ilungiselela ukukhutshwa okukhulu okulandelayo
IPlasma 5.22.5 ifikile njengogqibo lokugqibela lolondolozo kolu ngcelele, ivula indlela yokukhululwa okulandelayo.
I-KDE iphela ngo-Agasti ilindele ukuba iyakusivumela ukuba sikhethe umbala woxinzelelo lwePlasma kunye nezinye izinto ezintsha
Iprojekthi ye KDE iqinisekisa ukuba siya kuba nakho ukukhetha umbala woxinzelelo lwePlasma, kwaye silindele ezinye iindaba eziza kufika kungekudala.
I-KDE isebenza kwizinto ezininzi, ezinje ngendlela entsha yokubonisa windows eya kuthi ithathe indawo yeWindows yangoku.
Nge-KDE Gear 21.08 ngoku iyafumaneka, iprojekthi igxile kwiGear 21.12 kunye nezixhasi kwiPlasma 5.23
I-KDE ijolise ekulungiseni i-bugs ezininzi, kwaye sele iqalile ukulungiselela i-KDE Gear 21.12 eza kufika ngoDisemba olandelayo.
I-KDE Gear 21.08 ifikile njengenguqulelo yokuqala yolu ngcelele, oko kuthetha ukuba kuza neempawu ezintsha kunye ne-tweaks kwi-UI.
I-KDE iya kwenza kube lula kuthi ukuba sabelane ngokuseta i-icon yethu, qhubeka uphucula iPlasma Mobile nokunye okuninzi
I-KDE ayidinwa kwindlela yayo yokuqhubela phambili ukuphucula isoftware yayo, kubandakanya iPlasma Mobile yezixhobo eziphathwayo.
Nangona i-KDE isebenza nzima ukuphucula i-Wayland, ayilibale malunga neX11. Iindaba zale veki
Iqela loLuntu le-KDE, elibonakala ligxile ekuphuculeni i-Wayland, lithembise nangakumbi ukuphucula kwiseva yeX11.
IPlasma 5.22.4 ilapha njengokuhlaziywa kokugqibela kolu luhlu kwaye, mhlawumbi, ngokulungiswa okungaphezulu kunokuba bekulindelwe
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.22.4, uhlaziyo lwesine lohlaziyo kuthotho oluza nolungiso olungaphezulu kunokuba bekulindelwe.
I-KDE iya kongeza ukhetho lokukhetha phakathi kokusebenza kunye nokuzimela, iya kuphucula i-Kickoff kwaye ilungiselele lonke olu tshintsho
Iprojekthi ye KDE izakuqhubela phambili ukuphucula iKickoff kwaye yongeze iiprofayili zamandla ukubeka phambili ukusebenza okanye ukuzimela, phakathi kolunye uphuculo.
I-DRM iya kuphucula kakhulu kwixa elizayo, kunye nolunye uphuculo oluzayo kwi-KDE
I-KDE ipapashe inqaku leveki elibonisa ukuba i-KWin ye-DRM iya kuphucula kakhulu. Hambisa kwakhona ikhonkco lekhonkco leSteam.
I-KDE ikhuphe inqaku labo leendaba ngolwe-Sihlanu, ngolungiso oluninzi lweWayland kwaye uninzi luza kuza nePlasma 5.23
I-KDE Gear 21.04.3 iza nezinto ezintsha ukuphucula amava xa usebenzisa iseti yeprojekthi yezicelo. Iimpawu ezintsha ngenyanga.
IPlasma 5.22.3 ikhutshiwe ngokulungiswa okuphucula amava omsebenzisi kwimeko yemizobo yeprojekthi ye KDE.
UGwenview uzokwazisa inqaku elitsha lokutshintsha umbala ongasemva ngokukhawuleza, kunye neendaba ezininzi eziza kwi KDE
I-KDE ipapashe inqaku leveki elibonisa ukuphuculwa kweGwenview ukuze imvelaphi ihlale ibonakala ilungile.
I-Konsole iya kongeza inkqubo entsha ye-plugin, kunye nezinye izinto ezintsha eziza kwi-KDE
I-KDE isebenza kuphuculo lwesoftware yayo, kwaye phakathi kwazo kumi inkqubo entsha yeeplagi eziza kongezwa kwiKonsole yayo.
IPlasma 5.22.2 isusa i-Discover's phantom package-to-update isaziso kunye ne-bugs ezimbalwa
IPlasma 5.22.2 ifikile njengendawo yokuhlaziya amanqaku ukulungisa iibhugs zoluhlu olunganiki zingxaki zininzi.
I-KDE ilungiselela ukuphakanyiswa kobuso kweGwenview kunye nokulungiswa kwePlasma 5.22
I-KDE ilungiselela utshintsho, kubandakanya ukuphakanyiswa kobuso kumbonisi wayo we-Gwenview kunye nokulungiswa kwePlasma 5.22.
IPlasma 5.22.1 ifika ilungisa iibugs zokuqala kuthotho olwalubonakala ngathi lufike ngaphandle kweebugs ezinkulu
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.22.1, uhlaziyo lokuqala lolondolozo kuthotho olufike ngaphandle kwemicimbi emininzi ebalulekileyo.
I-KDE iqinisekisa ukuba iPlasma 5.23 iya kuba lolunye upapasho olukhulu oluya kubandakanya utshintsho lwezinto zokuthambisa esingasayi kufuna ukulinda ukuvavanya.
I-KDE Gear 21.04.2 ilapha ngaphezulu kokulungiswa kwe-80 kunye newebhusayithi entsha ka-Elisa
I-KDE Gear 21.04.2 ifikile njenge-app yeJuni ye-KDE esetiweyo kunye nokulungiswa ukubenza bathembeke ngakumbi kwaye bazinze.
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.22, inguqulelo entsha yemo engqongileyo yemizobo ezisa iindaba kwaye ithathe ilitye elidala: I-KSysGuard iyanyamalala.
NgePlasma 5.22 kufutshane nekona, i-KDE iya kuqala ukugxila ekuphuhliseni iPlasma 5.23
IPlasma 5.22 iza kwiintsuku ezi-4, ke iprojekthi ye KDE iza kuqala ukugxila kuhlobo olulandelayo, iPlasma 5.23.
I-KDE iqhubeka nokuphucula i-Wayland ngokubanzi kunye nokujonga ngokukodwa
I-KDE igcina ukuphucula i-Wayland ukuya phambili, kunye nezinye iisoftware ezinje nge-Elisa, Spectacle kunye nePlasma 5.22 yemeko-bume yemizobo.
I-KDE iveza ukhetho olutsha lwe-KCommandBar kunye nelinye iqela lezinto ezintsha eziza kuza kwikamva eliphakathi
I-KDE ipapashe inqaku elitsha leveki kwaye phakathi kweempawu zayo ezintsha abazibize ngokuba yi-KCommandBar ibonakala ilungiselela amanyathelo.
Iprojekthi ye KDE ikhuphe iPlasma 5.22 yeentsuku ze-beta ezidlulileyo kule veki, kwaye sele iqalile ukugxila kuhlobo olulandelayo, iPlasma 5.23.
I-KDE ikhuphe i-KDE Gear 21.04.1, uhlaziyo lwenqaku lokuqala kuhlobo lokuqala lwesoftware yalo ukusukela ngokutshintsha kwegama.
I-KDE ibhengeze ukuba bayasebenza ekwenzeni i-Plasma interface yomsebenzisi ijongeke ngcono nangakumbi xa kukhutshwa okulandelayo.
IPlasma 5.21.5 ifika kunye nokuchukumisa kokugqibela kuthotho olungakhange lubonise iingxaki ezininzi
Iprojekthi ye KDE ikhuphe iPlasma 5.21.5, uhlaziyo lwamva nje lolondolozo kuthotho olusebenze kakuhle kwasekuqaleni.
I-KDE yongeza ukuphuculwa ngakumbi kwiWayland kunye nezinye izinto ezinje ngenkxaso ye-GPU eshushu
Emva komhla wokuzalwa kwakhe, uNate Graham uphinde wakhupha utshintsho oluza kwi-KDE, kubandakanya uninzi lokuphucula umthetho olandelwayo waseWayland.
I-KDE Gear 21.04 yinguqulelo yokuqala yeeNkqubo ze-KDE ezisetiweyo emva kokutshintsha kwegama, kwaye yazisa ngemisebenzi emitsha ebalulekileyo.
Uhlaziyo lwe-KDE neon oluzenzekelayo luya kukhethwa, kunye nezinye izinto ezilindelwe yiprojekthi
Iprojekthi ye-K ibeke iziqhoboshi kwaye izakongeza inqaku eliya kuvumela i KDE neon uhlaziyo oluzenzekelayo ukuba lwamkelwe okanye laliwe.
I-KDE iyaqhubeka nokugxila ekuphuculeni iWayland kwaye ilungiselela lonke olu tshintsho
Ukusuka kwinkangeleko yayo, ikamva lidlula eWayland. Ubuntu 21.04 isebenzisa ngokungagqibekanga, kwaye i-KDE ijolise ...
IPlasma 5.21.4 ngoku iyafumaneka, ilungisa izimbungulu kwindawo eza kusetyenziswa yiHirsute Hippo
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.21.4, uhlaziyo lwesondlo olubonakala ngathi lubandakanya uKubuntu 21.04 Hirsute Hippo.
I-KDE iya kusasaza iihambhega kuyo yonke idesktop, kunye notshintsho olungakumbi abalukhankanyileyo kule veki
Enye yezinto ezinqabileyo iprojekthi ye KDE esebenza kuyo yongeza iihamburger kwiimenyu zayo zonke izicelo zayo.
I KDE Gear ayizukuba yi "software engadibaniyo", kodwa igama elitsha kwi KDE Izicelo
Iprojekthi ye-K ibhengeze ukuba izicelo ze-KDE ziya kuliguqula igama lalo ngo-Epreli libe yi-KDE Gear, ebonakala ilungile.
Iprojekthi ye KDE iqhubele phambili iphepha eliphambili kwiiNkqubo ezikhethwayo ezibonisa iiSeto eziKhawulezayo, kunye nezinye iindaba zedesktop.
Izicelo ze KDE 21.08 sele ziphuhlisiwe. Iindaba kunye nolunye utshintsho olulungiselelwe yiprojekthi
Iprojekthi ye KDE isixelele ngeendaba zokuqala eziza kungena kwii-KDE Izicelo ezingama-21.08 nolunye utshintsho kwidesktop.
Iprojekthi ye KDE ikhuphe iPlasma 5.21.3, uhlaziyo lwesithathu lokugcina kolu luhlu luza kupolisha idesktop.
U-Elisa uqhubeka ephucula njengomdlali womculo, kunye nolunye utshintsho olusebenzayo kwi KDE
I-KDE iyaqhubeka nokongeza izincedisi kumdlali wayo womculo, uElisa, kwaye isebenza kutshintsho oluza kuphucula i-desktop okwethutyana.
I-KDE ilungiselela into ebonakalayo ebonakalayo ebonakalayo kwiipaneli zePlasma kunye nolunye utshintsho
I-KDE Plasma 5.22 iya kwazisa ngenkqubo entsha yokubonisa ngokucacileyo yeepaneli ukwenza iphepha lodonga libonakale.
Izicelo ze KDE 20.12.3 ifika njengombuyekezo wokugqibela kolu ngcelele, isenza isiphelo sokugqibela
Izicelo ze KDE 20.12.3 ifikile ukulungisa ii-bugs zamva nje kuseto lwe-KDE yoseto kunye nokulungiselela i-v21.04.
I-KDE Gear: Isoftware "engahambelaniyo" enemihla ecwangcisiweyo inegama elitsha
I-KDE Gear yiphakheji yesoftware engadibaniyo neprojekthi eza kuqala ukusihambisa kuyo ngemihla ebekiweyo, kodwa yintoni iGear?
IPlasma 5.21.2 ifika ilungisa iibugs, kodwa akukho namnye onobuzaza
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.21.2, uhlaziyo lwesibini lokugcina kolu luhlu luza nezilungiso ezincinci.
Khange ivele imbi njenge-5.20, kodwa i-KDE isapolisha iPlasma 5.21 ngelixa ilungiselela utshintsho oluninzi
I-KDE iyaqhubeka nokusebenza kuphuculo oluninzi oluza kuza kuVumbulula, iDolphin, ii -apps zazo ngokubanzi kunye nePlasma 5.22, phakathi kolunye utshintsho.
IPlasma 5.21.1 ifika ilungisa iibugs zokuqala, kodwa zimbalwa ezibaluleke ngokwenene
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.21.1, uhlaziyo lokuqala lolondolozo kolu ngcelele olungisa izimbungulu ezimbalwa zokuqala, kodwa azikho nzulu kakhulu.
IPlasma 5.21 sele inebhetshi yokuqala yezilungiso ezilungisiweyo, kwaye i-5.22 kunye nezinye iindaba zisalungiswa
Iprojekthi ye KDE ijolise ekulungiseleleni iibugs zokuqala kwiPlasma 5.21, imeko ebonakala iyimpumelelo enkulu eluntwini.
IPlasma 5.21 ifika inenguqulo entsha yeKickoff kunye nezinye izinto ezinqabileyo
IPlasma 5.21 ifikile ngokusesikweni, kunye neKickoff entsha kunye nezinye izinto ezintsha eziqhubeka nokuphucula le meko yokuzoba.
IPlasma 5.21 ikufutshane nekona, kwaye i-KDE isalungiselela ukuthintela kwayo okokugqibela kunye nolunye utshintsho
I-KDE ilungiselela ukugqitywa kokugqibela kwePlasma 5.21, kodwa ikwalungiselela iPlasma 5.22 kunye neZicelo ze-KDE 21.04 ku-Epreli olandelayo.
I-KDE Plasma 5.22 iya kuphucula inkxaso kwimidlalo yesikrini esigcweleyo kunye neeapps, kunye nezinye izinto ezintsha eziqhubela phambili kule veki
Iprojekthi ye KDE ipapashe inqaku elitsha lokujonga kuqala izinto eziza kufikelela kwidesktop yakho, uninzi lwazo sele lukhona kwiPlasma 5.22.
Izicelo ze KDE 20.12.2 iyaqhubeka nokulungisa iibugs kolu luhlu kwaye isazisa ngotshintsho kwisicwangciso seCalligra naseKongress
Izicelo ze KDE 20.12.2 zilapha ukuze uqhubeke nokulungisa iibugs kwisicelo se KDE esikhutshwe ngoDisemba 2020.
I-KDE iyaqhubeka nokupolisha iPlasma 5.21 ngaphambi kokukhutshwa kukaFebruwari kunye nokujonga kuqala iindaba zokuqala zePlasma 5.22
I-KDE isasebenza ukuze yonke into ilungele ukukhutshwa kwePlasma 5.21, kunye nokulungisa ezinye iibugs kwidesktop yakho.
I-KDE isungula i-beta yePlasma 5.21 kwaye isixelela ngezinto ezininzi ezinqabileyo zayo
I-KDE ikhuphe i-beta yokuqala yePlasma 5.21 kwaye kwinqaku lale veki uthetha ngezinto ezininzi ezintsha eziza kuzisa.
I-KDE iyakubuyisela okubhaliweyo kwi-Konsole, i-ARK yayo iya kuxhasa iifayile ze-ARJ kwaye ilungiselele ezinye izinto ezintsha
I-KDE ipapashe ungeniso olutsha kwibhlog yayo kunye neendaba eziqhubela phambili, ezinje ngokuba i-ARK iyakuxhasa iifayile ze-ARJ okanye uKonsole uya kuyenza kwakhona itekisi.
I-KDE iveza ngokusesikweni umfanekiso omtsha weKickoff, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo
I-KDE ipapashe inowuthi yayo yeveki kwaye iqulethe uhlobo olulandelayo lweKickoff oluza kujongeka, umqalisi weapp kunye nolunye uphando.
Izicelo ze KDE 20.12.1 iqala uhlengahlengiso lokuseta usetyenziso lukaDisemba 2020
Izicelo ze KDE 20.12.1 ifikile njengohlaziyo lokuqala lolondolozo kolu luhlu ukuqala ukulungisa iibugs zokuqala.
Le yiPlasma 5.21 iphepha lodonga, kwaye ijongeka ingaphantsi kwe "KDE" kunesiqhelo
IPlasma 5.21 isixelele ukuba iya kuba yintoni iphepha lodonga, inye inemibala emininzi kunye neemilo ezincinci zomzimba kunesiqhelo.
IPlasma 5.20.5, ngoku iyafumaneka ngokuhlaziyo lokugcina kolu ngcelele lubalulekileyo kunye nokuchukumisa kokugqibela
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.20.5, ukukhutshwa kolondolozo lwamva nje kolu ngcelele oluqhubeka nokulungisa iibugs ukufumana yonke into ngaphandle kwebhokisi.
I-KDE ivuyisana nathi ngo-2021 ngokulindela ukuthintelwa kokuqala kwalo nyaka
I-KDE ikhuphe iposti yokuqala yeendaba ye-2021 isixelela ngotshintsho oluza kufika kwiinyanga zokuqala zonyaka.
I-KDE ayimisi nkqu ngeKrisimesi kwaye ilungisa imisebenzi emitsha, enje ngohlaziyo oluzenzekelayo
I-KDE iqhubele phambili ukuba iPlasma 5.21 iya kongeza umsebenzi apho sinokufaka khona uhlaziyo ngokuzenzekelayo, phakathi kwezinye izinto ezintsha.
I-KDE iqhubeka nokusebenza ukuphucula yonke into kancinci, kwaye kungekudala izakuxhasa ifomathi yemifanekiso ye-AV1
Kule veki, i-KDE ayikhankanyi naziphi na izinto eziqaqambileyo, kodwa ziyaqhubeka nokusebenza ukwenza eyona desktop ilunge ngakumbi.
U-Elisa uya kongeza inqaku elitsha, kwaye i-KDE iyaqhubeka nokulungiselela iPlasma 5.21 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.78
U-Elisa uya kongeza umsebenzi wokuphinda ingoma ephindaphindwe, kwaye i-KDE iqhubeka isixelela ngento ezayo kwiPlasma 5.21 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.78.
I-Kdenlive 20.12.0 ikhutshiwe ngoku, kwaye igcwele iinguqu eziza kuphucula amava xa usebenzisa umhleli wevidiyo we KDE.
Izicelo ze KDE 20.12 zilapha, kunye nohlobo olutsha lweSpectacle esivumela ukuba senze iimarkkups
Izicelo ze KDE 20.12 ifikile yokwazisa imisebenzi emitsha kuseto lweeapps zayo, njengeyona ibalulekileyo kwizixhobo zayo zoMboniso.
I-KDE ilungiselela umkhethi ngokubamba isitshixo kunye nezinye izinto ezintsha
I-KDE ipapashe inqaku layo leendaba leveki ngeveki apho iphakamisa ukuba oonobumba abakhethekileyo baya kuvela kungekudala ngelixa bebambe amaqhosha.
UDejà vu: IPlasma 5.20 ayizukubetha uKubuntu kude kufike iHirsute Hippo
Ukuba ulinde iPlasma 5.20 ukuba ifike kwi-Kubuntu yakho nge-Backports PPA, iindaba ezimbi: abanazicwangciso zokuzilayisha kwindawo yokugcina izinto.
IPlasma 5.20.4 ifika ukuze iqhubeke nokulungisa ii-bugs, kodwa ngaba iya kufikelela kwi-Backports PPA?
IPlasma 5.20.4 ikhutshiwe ngokusesikweni, kodwa sisenombuzo omnye: ngaba iya kuthi ekugqibeleni ifike kwindawo yokugcina izinto zeKDE zeKubuntu?
I-KDE igcina ukulungisa iPlasma 5.20 bugs kunye nokulungiselela iPlasma 5.21
IPlasma 5.20 yeza neebugs ezininzi kunokuba bekulindelwe, ke i-KDE isasebenza ukuyilungisa ngokukhawuleza.
I-KDE ilungiselela omnye umqulu we-bugfix kwi-Wayland, kunye nolunye uphuculo oluninzi
I-KDE iyaqhubeka nokusebenza ukuphucula i-Wayland kwidesktop yayo, kunye nokongeza amanqaku amatsha kunye nokulungisa ezinye iibugs.
U-Elisa uya kusivumela ukuba simake iingoma, kunye nezinye iindaba eziza kwi-KDE
I-KDE isinike amanqaku amaninzi kwizicelo zayo, phakathi kwazo sinokuthi uElisa uya kusivumela ukuba simake iingoma.
IPlasma 5.20.3 iyaqhubeka nokulungisa iibhugi kunye nokulungiselela ukufika kwayo kwiPackports PPA
IPlasma 5.20.3 ikhutshiwe ngokusesikweni, kodwa iya kubetha kwindawo yokugcina izinto ze-KDE ukuba iprojekthi icinga ukuba ilungile.
I-KDE yazisa iNkqubo yoHlolo lweNkqubo entsha ethatha indawo yeKSysGuard kunye nolunye utshintsho lwexesha elizayo
I-KDE ikhuphe iNkqubo yoHlolo lweNkqubo, ethatha indawo yeKSysGuard yangoku, kunye nolunye utshintsho olusebenzayo kuyo.
I-KDE iyaqhubeka nokubulawa kwayo kwabantu ngokukhawuleza okuqale kwiiveki ezimbini ezidlulileyo
I-KDE isebenza nzima ukulungisa zonke iibugs abazifumeneyo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngokufika kwePlasma 5.20.
IPlasma 5.20.2 ilapha kwaye kufuneka ikhule ngokwaneleyo ukuze yamkelwe ngobuninzi ngoku
IPlasma 5.20.2 ikhutshiwe emva kweeveki ezimbini emva kokukhutshwa kokuqala ukuqala ukubuyisela uzinzo ebekufanele ukuba belukhona.
I-KDE yayinokulungisa okuninzi, kwaye isasebenza ekuphuculeni iPlasma 5.20
I-KDE ikhuphe ungeniso lweendaba ezimbini kwiintsuku ezimbini, ezibonisa ukuba banenkxalabo malunga neebugs ezifakwe kwiPlasma 5.20.
IPlasma 5.20.1 ifika ngeZithembiso zokuQala zeBug eziQinisekisiweyo ezibeka "i-KDE kwihlazo"
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.20.1, enye yezona zihlaziyo zokuqala zokulungisa izinto ezilungisayo.
I-KDE sele inezinto zokuqala ezilungele ukuphucula iPlasma 5.20
I-KDE ithembisile ukuba sele ilungisile iibugs zokuqala eziye zafunyanwa kwiPlasma 5.20, kwaye isixelela ngezinye izinto ezintsha.
IPlasma 5.20 ifika nepaneli entsha esezantsi, izinze ngakumbi kwaye inezi zinto zintsha
IPlasma 5.20 ilapha njengenguqulelo yemo engqongileyo ebonisa imifanekiso emininzi emitsha kwaye ithembisa ukuba iya kuba lulwelo ngakumbi kunangaphambili.
I-KDE ithembisa ukuba iPlasma 5.20 iya kusebenza ngokugudileyo kwaye izinzile kuneenguqulelo zangaphambili
I-KDE isixelele kwakhona malunga noko ikulungiselelayo kwaye iqinisekisa ukuba iPlasma 5.20 iya kugudla kwaye izinze ngakumbi kunakwinguqulelo zangaphambili.
Izicelo ze KDE 20.08.2 ifikile ukuze iqhubeke nokulungisa iimpazamo zolu ngcelele
Izicelo ze KDE 20.08.2 ifikile njengohlaziyo lwesibini lokugcina kolu luhlu ukuqhubeka nokulungisa ii-bugs ezaziwayo.
I-KDE Plasma 5.21 iza kuza nokuphuculwa okuninzi, njengokulungiswa komxholo weBreeze
I-KDE isebenza kuphuculo kumxholo weBreeze oza kufika ngePlasma 5.21, kunye nolunye utshintsho olunomdla kakhulu.
I-KDE iveza uShell, iphepha lodonga lePlasma 5.20, kunye neendaba zokuqala eziza kwiPlasma 5.21
I-KDE ityhile ukuba iphepha lodonga liza kusetyenziswa njani kwiPlasma 5.20, kunye nezinye izinto ezintsha, kubandakanya ezinye ezivela kwi-v5.21.
Ukufumanisa kuya kuqala ngokukhawuleza kwiPlasma 5.20, kunye nezinye izinto ezintsha eziza kwidesktop ye KDE
Kungekudala, ukuqala isikhungo seSoftware siza kukhawuleza, kodwa kuya kufuneka silinde ukukhutshwa kwe-KDE Plasma 5.20.
Umboniso uya kusivumela ukuba senze izichasiselo ekubambeni, kunye nezinye iindaba eziza kwi KDE
I-KDE isixelele ngezinto ezininzi abasebenza kuzo, kwaye enye yazo kukuba siya kuba nakho ukuchaza ngeSpectacle.
Izicelo ze KDE 20.08.1 ifika ukulungisa i-bugs zokuqala ezaziwayo kolu ngcelele
Izicelo ze KDE 20.08.1 ifikile njengoSeptemba usetyenziso lokuseta uhlaziyo ukulungisa iibugs zokuqala ezaziwayo.
I-KDE iphinda isikhumbuze ukuba iPlasma 5.20 iya kuba sesona sikhulu, kunye notshintsho njengeKRunner edadayo
I-KDE iphinde yapapasha inqaku ngayo yonke into abayilungiselelayo, kwaye kuyo bayasikhumbuza kwakhona ukuba iPlasma 5.20 iya kuba yindawo entle.
Izicelo ze KDE ziyakukhumbula indawo kunye nobungakanani beewindows zakho, kunye nezinye iindaba eziza kungekudala
Kungekudala zonke izicelo ze KDE ziya kukhumbula indawo yokugqibela kunye nobungakanani, ke ukuyivula kamva kuya kuhlala kunjalo.
Ukukhethwa kweNkqubo yePlasma 5.20 kuya kusixelela ukuba silwenzile naluphi na utshintsho, kunye nezinye izinto ezintsha ezisebenza kwi-KDE
I-KDE ilungiselela uninzi lweempawu ezintsha zePlasma 5.20, njengenye kwiiNkqubo ezikhethwayo zeNkqubo ukuze wazi apho sichukumise khona into.
I-KDE ibuya izokusixelela ngotshintsho oluninzi lwexesha elizayo, ukuphuculwa kweWayland kwaye sele belungiselela iiNkqubo-sikhokelo 5.74
I-KDE ibuyele esiqhelweni kwisithuba sayo seveki kwaye ibuyile isixelela ngenani lokuphuculwa abasebenza kulo.
I-KDE ilungiselela ukuphucula umphathi womsebenzi kunye nokwazisa ezinye izinto ezintsha
I-KDE isebenza ukuphucula umphathi womsebenzi kwipaneli esezantsi, phakathi kwezinye izinto eziza kuza kwi-desktop yakho kungekudala.
IPlasma 5.19.4 ifika njengenguqulelo yokugqibela yolu chungechunge ukuze iqhubeke nokwenza i-desktop
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.19.4, ulondolozo lwesine olukhutshiweyo kolu ngcelele, olungayi kuyenza kwindawo yokugcina izinto ze-KDE.
I-KDE ilungiselela ukukhangela kunye nebhodi eqhotyoshwayo ekwabelwana ngayo eWayland, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo
I-KDE ilungiselela imeko yayo yemizobo ukuze ukwazi ukwenza iscreencast kwiWayland, kunye nezinye iindaba ezizayo.
I-KDE isasebenza kwiinguqu ezininzi zePlasma 5.20 kunye nezinye izinto ezintsha
I-KDE isasebenza ekuphuculeni i-desktop yayo kunye notshintsho oluncinci lwe-interface kwiPlasma 5.20 kunye nezinye izinto ezintsha ziyeza kungekudala.
I-KDE ilungiselela ukuphuculwa okutsha kweWayland eya kuthi ifike kwiPlasma 5.20, kunye nolunye utshintsho oluzayo
I-KDE ilungiselela ukuphuculwa kweWayland kunye neendaba ezibalulekileyo eziza kuvela kwisandla sePlasma 5.20, ukukhutshwa kwayo okukhulu okulandelayo.
Izicelo ze KDE 20.04.3 ifika njengenguqulelo yamvanje yolu ngcelele ukulungisa iibugs zamva nje ngaphambi kokukhutshwa kuka-Agasti
Izicelo ze-KDE 20.04.3 lupapasho lwamva nje lolondolozo kolu ngcelele kwaye ulapha ukulungisa iincukuthu kuseto losetyenziso olukhutshwe ngo-Epreli.
IPlasma 5.19.3 ifika ukuze iqhubeke nokulungisa iimpazamo, kodwa hayi kwindawo yokugcina izinto ezingasemva
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.19.3, kodwa iya konwatyiswa kuphela ngabo basebenzisa ezinye izinto ezinje nge-KDE neon okanye nemodeli yophuhliso lweRolling Release.
Kubonakala ngathi ngezinto ezintsha esele zibonisiwe, i KDE iya kuqhubeka ukugxila ekulungiseni zonke izinto ezinokubakho kwi desktop yakho
I-KDE iya kuqhubeka nokusebenza ukulungisa zonke izinto ezinokubakho kwidesktop yakho, ethembisa iPlasma 5.20 ngophuculo oluninzi kunye nokuthembeka okukhulu.
I-KDE izimisele ukulungisa ukungqubana okuninzi kwi desktop yakho, njengoko kubonisiwe kule veki
Iprojekthi ye KDE iqinisekisa ukuba izakulungisa zonke iibugs ezinokubakho kwidesktop yakho kwaye kweli nqaku unomboniso wento abafuna ukuyenza.
Ukuba uyilindele, uxolo: IPlasma 5.19 ayizukuyenza kwindawo yokugcina izinto ze-KDE
Sele sisazi ukuba kutheni iPlasma 5.19.0 ingakhange iyenze kwindawo yokugcina izinto ezingasasebenziyo okwangoku. Iqinisekisiwe ukuba ixhomekeke kwenye isoftware kwaye ayizukuyenza.
IPlasma 5.19.2 ifika ilungisa izimbungulu ezimbalwa kolu ngcelele, kubandakanya nokuphinda ubuye
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.19.2, uhlaziyo olutsha lolondolozo olulungisa ezininzi iibugs abazifumene kolu luhlu.
Ukongeza ekulungiseleleni ukukhutshwa okulandelayo, i-KDE ijolise kakhulu ekucoceni iPlasma 5.19
I-KDE isebenza kuphuculo oluninzi oluza kuza kwidesktop yakho kungekudala, phakathi kwayo sinesandla esiza kupolisha iPlasma 5.19.
IPlasma 5.19.1 ikhutshiwe ukulungisa iibhugi kolu ngcelele xa ingxelo yokuqala ingekayenzi kwiPPA yokubuyela umva
Xa ingxelo yangaphambili ingekafiki kwindawo yokugcina izinto ezingasemva, i-KDE ikhuphe iPlasma 5.19.1 ukulungisa iibugs zokuqala kolu ngcelele.
Emva kokukhutshwa kwePlasma 5.19, i-KDE iyaqala ukugxila kwiPlasma 5.20 kwaye inkqubo yayo yetreyi iya kuphucula kakhulu
I-KDE Plasma systray iya kuphuculwa kakhulu kuhlobo olulandelayo lwendawo yemizobo. Sikwathetha nangezinye iindaba ezizayo.
Izicelo ze-KDE 20.04.2 ngoku ziyafumaneka, ngaphandle kweempawu ezintsha kodwa ziphucula iqela leapps
Ngoku ziyafumaneka Izicelo ze KDE 20.04.2, uguqulelo lwesibini lokugcina kolu ngcelele oluza ukulungisa iibugs ezifunyenweyo.
IPlasma 5.19 ngoku iyafumaneka nolawulo lwePlppak olungcono kunye nolunye utshintsho
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.19, inguqulelo entsha engeyiyo ye-LTS yemeko-bume yemizobo eza nophuculo kuyo yonke idesktop yeprojekthi.
Ukujonga kuqala kwe-KDE izinto ezininzi ezintsha eziza kwiPlasma 5.20
Kule veki uNate Graham ovela kuluntu lwe KDE uthetha ngezinto ezininzi ezinomdla eziza ePlasma kunye nezicelo zayo ze KDE.
IPlasma iya kusivumela ukuba sikhuphe i-ISO ngokuthe ngqo kwiDolphin, kunye nolunye utshintsho olusebenzayo kwi-KDE
Ekungeneni kwalo mqondiso, i-KDE isixelela ngezinto ezintsha ezinje ngokuba sinako ukubeka imifanekiso ye-ISO ngqo kumphathi wefayile yePlasma.
I-KDE isixelela ngeendaba zokuqala zePlasma 5.20 kunye nokufudukela kwayo kwiGitLab
UNate Graham ovela kwi KDE usixelele ngezinto ezininzi ezizayo ezizayo, ezinjengeyokuqala zePlasma 5.20 kunye nokufudukela kwayo kwiGitLab.
Iindaba zokuqala kwiPlasma 5.19 beta kunye nolunye uphuculo oluzayo kwi-KDE
I-KDE isinike izinto ezininzi eziza kuza kwi-desktop yakho kungekudala, kubandakanya ezininzi ezivela kwiPlasma 5.19.0, okwangoku kwi-beta.
Izicelo ze-KDE 20.04.1 ngoku ziyafumaneka ukuze ziQale ngokuLungisa i-Epreli 2020 yoSetyenziso lweeNkqubo zokuSeta iiBugs
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-KDE Izicelo 20.04.1, uhlaziyo lokuqala lolondolozo kolu ngcelele, apha apha ukufumana izinto zokuqala ezimbalwa.
U-Elisa kunye nezinye ii -apps ze KDE ziya kubandakanya inkxaso yeencwadi zomsindo kunye nezinye izinto ezizayo kungekudala
U-Elisa kunye nezinye izicelo ze-KDE ziya kuba nakho ukudlala iincwadi zomsindo ukuqala ngeli hlobo, kunye nezinye izinto ezintsha eziza kwi-KDE kungekudala.
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.18.5, ukukhutshwa kwesondlo kwangoko kolu ngcelele olulungisa iibugs zamva nje ukufumana yonke into igqibelele.
I-KDE ilungisa uphuculo kwiDolphin kunye nezinye izinto ezininzi
Inqaku likaNate Graham leveki malunga nento eza kwi-KDE isixelele malunga nokuphuculwa kweDolphin nolunye utshintsho oluncinci.
I-KDE iya kuqhubeka nokuphucula i-Elisa iya kulandela ngo-Agasti kunye nolunye utshintsho oluza kufika kungekudala kwidesktop yakho
I-KDE ibhengeze ukuba umdlali ongagqibekanga kaKubuntu, uElisa, uya kuqhubeka nokuphucula ihlobo, phakathi kwezinye izinto eziza kukhutshwa kungekudala.
Izicelo ze-KDE 20.04 ngoku ziyafumaneka, uhlaziyo olukhulu oluza nemisebenzi emitsha e-Elisa, iDolphin kunye nezinye iinkqubo zeprojekthi.
I-KDE igcina ukuphucula ii-systray kunye nee icon ze-applet
UNate Graham, ovela kuLuntu lwe-KDE, uthetha ngezinto ezintsha abazilungiselela i-desktop ayiphuhlisayo, kwaye azimbalwa.
I-KDE izakuvumela ukuba uqwalasele isantya sokukrola okanye "skrolela" kunye nezinye iindaba ezizayo
I-KDE ipapashe inqaku elitsha kwibhlog yalo apho isixelela khona ngeendaba ezizayo, ezinje ngokuba isantya sokukrola sinokuqwalaselwa.
IPlasma 5.18.4 ilibazisa ukufika kwayo kwindawo yokugcina izinto ezingasemva yiKubuntu 20.04 Focal Fossa
Ngaba ujonge ukufika kwePlasma 5.18.4 kwi-Discover yakho? AWUKHO wedwa. Ukufika kwayo kulibazisekile nguKubuntu 20.04 Focal Fossa.
I-KDE ithembisa ukuqhubeka nokuphucula ukusebenza kwezinye zesoftware
I-KDE ithembise ukuba izakuphucula ukusebenza kwezinye zesoftware, eya kuthi iguqulele kwisantya ngakumbi xa isenza eminye imisebenzi.
IPlasma 5.18.4, ukukhutshwa kokuphela koluhlu kuthotho olukhoyo ngoku
Uluntu lwe-KDE lukhuphe iPlasma 5.18.4, ulwaziso lwesine kunye nolondolozo lokugqibela lokupapashwa kwendawo yemizobo eza kusetyenziswa nguKubuntu 20.04 Focal Fossa.
I-KDE ithembisa isaqhwithi samanqaku amatsha kwisoftware eyiphuhlisayo
Kwinqaku lale veki, i KDE ithembise ukuba bazokwazisa amanqaku amaninzi kwisoftware abayiphuhlisayo. Zikwasixelela nolunye utshintsho
IPlasma Bigscreen: I-KDE ibonisa inkqubo yokusebenza eyenzelwe umabonwakude
I-KDE yazise iPlasma Bigscreen, inkqubo yokusebenza okanye isindululi esenzelwe ukusetyenziswa kumabonakude ahambelana neRaspberry Pi.
I-KDE ayiyeki kwaye iyaqhubeka nokulungiselela amanqaku amaninzi, ngaphandle kwengozi ye-COVID-19
Uluntu lwe-KDE luyaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwengxaki ye-COVID-19. Oomatshini bakho abayeki kwaye sele ulungiselela utshintsho kwixa elizayo kwisoftware yakho.
Isakhelo 5.68.0 siza notshintsho oluphantse lube ngama-200 ukupholisha yonke isoftware yeKDE
I-KDE ikhuphe i-Frameworks 5.68.0, inguqulelo yamvanje yala mathala eencwadi aphucula yonke into enxulumene ne-KDE ngaphakathi.
I-KDE ifuna ukugxila ngoku ekuphuculeni i-systray, kunye nolunye utshintsho olusebenzayo kuyo
I-KDE ijolise ekuphuculeni indawo yomzobo. Usebenza ngakumbi kwiinguqu esizikhankanyileyo apha.
IPlasma 5.18.3 ifika ukulungisa iibhugi kwaye yenza oku kukhululeka kube ngcono nangakumbi
IPlasma 5.18.3 sele ifikile njengokukhutshwa kwesithathu kulondolozo kolu ngcelele ukwenza imeko yemizobo ye KDE ibengcono.
Kule veki, i-KDE ijolise ekulungiseni i-bugs ezininzi, utshintsho lokuqala luya kufika kwiintsuku ezimbini
Kule veki, uLuntu lwe KDE lukhuphe iinguqu ezininzi, kodwa zonke zilungisa iibugs eziza kuphucula amava omsebenzisi kungekudala.
Izicelo ze-KDE 19.12.3 ifikile ukuze ifike ekugqibeleni kolu luhlu
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-KDE Izicelo 19.12.3, okwesithathu kunye nokugqibela kokukhutshwa kwesondlo kolu luhlu luza kulungisa iibugs.
I-KDE iqala ukugxila kwiPlasma 5.19 kwaye sele ilungisa lonke olu tshintsho
UNate Graham ovela kwi-KDE uthumele iposti emfutshane malunga nento abasebenza kuyo, ekubonakala ngathi sele bejolise kwiPlasma 5.19.
IPlasma 5.18.2 ngoku iyafumaneka ngotshintsho oluphucula amava omsebenzisi kwimeko ye KDE
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.18.2.
IPlasma 5.18.2 iya kwazisa ukulungiswa okutsha kwiintsuku ezimbini, kwaye ii-KDE Izicelo ezingama-20.04 sele zinomhla ocwangcisiweyo
IPlasma 5.18.2 izakufika ukuze iqhubeke nokusombulula iibugs kolu ngcelele kwaye iPlasma 5.19 iyaqhubeka nokusiqhubela iindaba eziza kubandakanya.
IPlasma 5.18.1 ifikile ukulungisa ezinye zeempazamo ezininzi ezize kolu ngcelele
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.18.1, ukukhutshwa kokuqala kokugcina kolu ngcelele olungisa uninzi lweebugs ezifunyenwe kwiveki ephelileyo.
IPlasma 5.18.1 iya kulungisa uninzi lweebugs olwenziwe kolu khululo lukhulu
IPlasma 5.18.1 iyeza kungekudala kwaye izakulungisa uninzi lweebugs ezifunyenwe kukhupho oludlulileyo. Iimpawu zexesha elizayo ziye zaqhubela phambili.
Isebenza njani into entsha yePlasma 5.18.0 emoji
Kule nqaku imfutshane sichaza indlela isicelo esitsha sokukhetha i-emoji esaziswa yi-KDE Plasma 5.18.0 isebenza.
IPlasma 5.18.0, ngoku iyafumaneka ngokusungulwa okukhulu ebesikulindile
IPlasma 5.18.0 sele ikhutshiwe ngokusemthethweni. Kuza notshintsho olukhulu kwinto ebaluleke kakhulu kwiPlasma ukuza kuthi ga ngoku.
Isakhelo 5.67 siza notshintsho oluphantse lube yi-150 ukuphucula amava e-KDE
Isakhelo se KDE 5.67 size notshintsho nje olungaphantsi kwe-150 oluya kuphucula amava omsebenzisi kuyo yonke isoftware ye KDE, njengePlasma.
IPlasma 5.18, efumaneka ngeentsuku ezimbini, ifumana okokugqibela ukuchukumisa, kunye nezinye iindaba eziza kwi KDE
IPlasma 5.18.0 iya kufika ngeentsuku ezimbini. Kweli nqaku siza kukuxelela malunga nezinto zokugqibela abazichukumisileyo kunye nezinye iindaba eziza kuza kamva.
Izicelo ze KDE 19.12.2 ifikile ukuze iqhubeke nokupholisha iiapps ezikhutshwe ngoDisemba
Uluntu lwe-KDE lukhuphe i-KDE Izicelo 19.12.2, ukukhutshwa kwesibini kokugcinwa kolu luhlu lufikile ukulungisa iibugs.
NgePlasma 5.18 kufutshane nekona, i-KDE iyaqala ukugxila kwiPlasma 5.19
I-KDE iqala ukugxila ekulungiseni i-Plasma 5.19 bugs, kodwa zisikhumbuza ukuba iPlasma 5.18 ziintsuku ezili-10 kuphela kude.
I-KDE ikunika iPC ukuba uphumelele ukhuphiswano lwevidiyo
Ungathanda ukuphumelela i-pc yokudlala ngokwabelana nevidiyo ebonisa eyona KDE ilungileyo kwihlabathi. Izandi ziphupha, awucingi? Kodwa ayifani ...
I-Telegram yinkqubo yokuqala yokufumana ukuhambelana nePlasma 5.18 izaziso ezisebenzisanayo kunye nezinye izinto ezintsha
Phakathi kwezinto ezintsha kule veki, iTelegram ifika ingxamile kwaye sele ihambelana nezaziso ezisebenzisanayo zePlasma 5.18.
Le yiplasma 5.18 iphepha lodonga. Kuthini nge?
IPlasma 5.18 ityhile iphepha lodonga oza kulisebenzisa. Iya kufumaneka xa ingxelo ezinzileyo ibetha indawo yokugcina izinto ezingasemva.
IPlasma 5.18 ibandakanya isixhobo sokunika ingxelo, siyazikhethela kodwa sonke kufuneka siyisebenzise
I-KDE Plasma 5.18.0 iya kwazisa ngesixhobo esitsha sokunika ingxelo esifana nesivele sikhona kwi-Ubuntu kwaye iya kuzikhethela.
IPlasma 5.19 ityhila iindaba zayo zokuqala. IPlasma 5.18.0 iza kwiiveki ezintathu
I-KDE ityhile kuthi kule veki ezinye zeendaba zokuqala ukuba zilungiselela iPlasma 5.19. Sikuxelela ezi kunye nezinye iindaba.
IPlasma 5.18.0 Beta ngoku iyafumaneka. Ezona ndaba zibalulekileyo kunye nendlela yokuzama
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-beta yokuqala yePlasma 5.18.0. Kule nqaku sikuxelela ezona ndaba zibalaseleyo kunye nendlela yokuzama ngayo ngoku.
Isakhelo se KDE 5.66 sikhutshiwe, sikwafumaneka ngoku kwiDisco ngotshintsho olungaphezulu kwe-100
Uluntu lwe KDE lukhuphe iNkqubo-sikhokelo ye-5.66, uhlaziyo olutsha oluza notshintsho olungaphezulu kwe-100 ukuphucula isoftware ye KDE.
I-KDE yazisa iapplet entsha yePlasma yoMbala woBusuku kunye nezinye izinto eziphambili kule veki
I-KDE isixelele kule veki malunga nezinto ezintsha ezinje ngeapplet yombala wasebusuku eya kuthi ibonakaliswe ngokuzenzekelayo kwitreyi yenkqubo.
Izicelo ze KDE 19.12.1 ifikile ukulungisa iibugs zokuqala kolu luhlu
Izicelo ze KDE 19.12.1 ngoku ziyafumaneka. Beza neenguqulelo eziphantse zibe ngama-300 kwaye kungekudala bazakufumaneka kwiisistim ezisebenzayo ezinendawo yokugcina ekhethekileyo.
IPlasma 5.17.5 ifika njengokukhutshwa kokugqibela kokugcina kolu ngcelele. Ukuma ngokulandelayo, iPlasma 5.18.0
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.17.5, ehambelana nokukhutshwa kwesondlo kuloluhlu kwaye ibeka inqanaba lePlasma 5.18.0.
I-KDE isinika izipho zeMagi, phakathi kwazo siza kuba nethuba lokuphendula imiyalezo evela kwisaziso
I-KDE ipapashe namhlanje, ooKumkani abathathu uEva, utshintsho oluza kuza kwisoftware yalo, njengenqaku elincomekayo kwinkqubo yokwazisa.
I-KDE ityhila izicwangciso zayo ze-2020. Ngaba kuya kubakho ukujonga okutsha ngePlasma?
Izolo, umhla wokugqibela we-2019, uNate Graham wenze uphononongo lwayo yonke into ephunyezwe yi KDE ...
I-KDE iphonononge impumelelo eyenziwe ngo-2019
Uluntu lwase KDE lupapashe inqaku elisikhumbuza ngenkqubela phambili abayenzileyo ngo-2019.
I-KDE ayiphumli ngeKrisimesi kwaye iyaqhubeka isixelela ngeendaba esebenza kuzo
UNate Graham ovela kwi-KDE Communiti uyaqhubeka nokusixelela malunga nento eza kuza kungekudala kwiPlasma, kwizicelo ze-KDE, kunye neeNkqubo-sikhokelo.
AyisiKubuntu 20.04, kodwa iPlasma 5.18 iya kuba nomncintiswano wephepha lodonga kwaye ngoku ungathatha inxaxheba
IPlasma 5.18 ivule ukhuphiswano lodonga onokuthi ngoku uthathe inxaxheba kulo. Ophumeleleyo uya kuvela kwiPlasma ukusuka ngoFebruwari
IPlasma 5.18 iya "kumangalisa" kwaye iya kubandakanya ezi zinto zintsha
UNate Graham usithembisile ukuba iPlasma 5.18 iya "kuhle", kwaye kule veki uthetha ngeendaba ezimnandi ezizayo ngoFebruwari.
Iplasma 5.18 iya kukuvumela ukuba usebenze ungaphazamisi imowudi ngonqumlo lwebhodi yezitshixo
IPlasma 5.18 iya kwazisa izinto ezininzi ezintsha, ezinjengeendlela ezimfutshane ezinokuvumela ukuba sisebenze kwaye sisebenzise imo yokungaphazamisi.
Isakhelo 5.65 siza notshintsho lwe-170 ukuqhubeka nokuphucula amava e KDE
Uluntu lwe KDE lukhuphe iiNkqubo-sikhokelo 5.65, ikhonkco lakutsha nje kwisoftware ejolise ekuphuculeni amava omsebenzisi kwi KDE.
Izicelo ze KDE 19.12 ngoku ziyafumaneka zipakishwe ngeeNqaku eziPhambili
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-KDE Izicelo 19.12, uguqulelo lwesithathu oluphambili lwe2019 luza luza nezinto ezintsha ezinomdla.
I-emoji iza kufika ePlasma ukusuka ngoFebruwari olandelayo
Nge-Plasma 5.18, abasebenzisi bendawo yemizobo ye KDE baya kuba nakho ukongeza i-emoji ngokukhawuleza nangokulula.
IPlasma 5.17.4 ifika ukuze iqhubeke nokupholisha imeko yemizobo ye-KDE
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.17.4, inguqulelo yamvanje yemeko yayo yemizobo efikileyo ukuze iqhubeke nokupholisha iincukuthu.
I-KDE ithembisa ngenkxaso epheleleyo yeGTK CSD kwikamva elingekude kakhulu
I-KDE iphinde yabhala inqaku leveki malunga noko basigcinele kona kwaye isithembisa ngenkxaso epheleleyo yeGTK CSD.
I-KDE ijolise ekucoceni isoftware yayo yangoku neyexesha elizayo
I-KDE ipapashe inqaku elitsha lisixelela ukuba bajolise ekucoceni iPlasma 5.17 kunye nokulungiselela iPlasma 5.18.
I-KDE iqala ukusixelela malunga neeapps zayo ezingama-20.04 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.65
I-KDE iphinde yapapasha inqaku malunga noko basigcinele kona kwaye sele bethetha ngeeZicelo ze-KDE 20.04 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.65.
IPlasma 5.17.3 ifika ukuze iqhubeke nokulungisa iibugs zolu chungechunge
Njengoko bekulindelwe, i-KDE namhlanje ikhuphe iPlasma 5.17.3, ukukhutshwa kwesithathu kulondolozo kolu ngcelele luza kuqhubeka nokulungisa ii-bugs.
Isakhelo 5.64 sifika ngaphezu kwama-200 ukulungisa kunye notshintsho
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-KDE Frameworks 5.64, inguqulelo yamvanje yeli qela lamathala eencwadi alapha ukwazisa ngaphezulu kweenguqu ezingama-200.
Izilungiso ezahlukeneyo kwiPlasma 5.17.3 kunye nezinye izinto ezintsha eziza kwi KDE
Uluntu lwe-KDE lwabelane ngeposi yeendaba zeveki kwaye phakathi kwabo sinezinto ezininzi eziza kufika kunye nePlasma 5.17.3.
Ukufumanisa kuya kuqhubeka ukuphucula, kunye nezinye iisoftware ze KDE
Uluntu lwe-KDE luthumele kwakhona iposti malunga nento entsha eyilungisayo, kwaye uninzi lwazo luchaziwe kule veki zinxulumene nokuFumanisa.
I-KDE ipapasha iinjongo zayo ezilandelayo: i-Wayland kunye nokuNgqinelana
Uluntu lwe KDE lupapashe inqaku elisixelela malunga neenjongo zabo ezilandelayo. Enye yazo kukuba yonke into iyahambelana.
IPlasma 5.17.2 ngoku iyaqhubeka ukuqhubeka nokulungisa iibugs ezifunyenwe kolu ngcelele
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.17.2, uhlaziyo lwesibini lokugcina kolu luhlu lufikile ukuqhubeka nokulungisa iibugs.
I-KDE Qhagamshela sele inenguqulo yolingo lweWindows
I-KDE Qhagamshela, inkqubo edumileyo evumelanisa iifowuni ze-Android neLinux, ikhuphe ingxelo yokuqala yolingo lweWindows.
IPlasma 5.18 iya kwazisa imowudi entsha ngokubanzi yokuhlela iiwijethi
IPlasma 5.18, inguqulelo ye-LTS elandelayo yemekobume yemizobo, iya kwazisa indlela entsha yokuhambisa kunye nokuhlela iiwijethi kwiphaneli ngokubanzi.
I-KDE kwaye iya kuba lolunye lolona khetho lubalaseleyo ngokweendawo zemizobo ngenxa yokukhanya kwayo, ngokutsho kweForbes
I-Forbes ibonelele ngolwazi ukubonisa uninzi lwethu esele luyazi: I-KDE kwaye iya kuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo zemizobo, ngenxa yokukhanya kwayo.
IPlasma 5.17.1 ifika ukuqala ukulungisa iimpazamo ezifumaneka kolu ngcelele
Njengoko bekulindelwe, uLuntu lwe-KDE lukhuphe iPlasma 5.17.1, ukukhutshwa kokuqala kokugcina kolu luhlu ukulungisa iibugs.
I-KDE iqhubeka nokuba ngcono: zimbalwa izinto ezintsha, ukulungiswa ezininzi kwiPlasma 5.17.1
Uluntu lwe-KDE luyaqhubeka nokusebenza ukusinika olona lwazi lubalaseleyo lomsebenzisi kwaye kule veki basixelela ngophuculo lwangaphakathi oluninzi.
IPlasma 5.17 sele ikho, zininzi izinto zayo ezinqabileyo
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.17, inguqulelo entsha yemeko-bume enkulu yemifanekiso eza neendaba ezininzi kwizaziso, phakathi kwabanye.
Isakhelo se KDE 5.63 ngoku iyafumaneka, iza neziLungiso ezili-141 kunye noPhuculo
I-KDE ikhuphe i-Frameworks 5.63, inguqulelo yamvanje yala mathala eencwadi eza kulungiswa kunye nokuphuculwa kwe KDE desktop.
Ukufumanisa ukuphuculwa kuya kuqhubeka nokufika kwiPlasma 5.18
I-KDE iyaqhubeka isixelela ngento eza kuza kwisoftware yayo kwaye ukufumanisa kuya kuqhubeka ukuphucula xa kukhutshwa iPlasma 5.18.
NjengoVumbulula kwiPlasma 5.17, iDolphin iya kufumana uthando oluninzi ngoDisemba
I-KDE iphinde yathumela ungeniso oluthetha ngento abayilungiselelayo kwaye bakhankanye amanqaku amatsha kumphathi wefayile yeDolphin.
IPlasma Mobile iya kuba necandelo layo "lokuSebenza kunye neMveliso" kwibhlog ye KDE
I-KDE iqalile ukuthumela iiposti zebhlog malunga nayo yonke into eza kwiPlasma Mobile, uguqulelo lweselfowuni kwimeko yayo yemizobo.
Ngohlobo olulandelayo olujikeleze ikona, lixesha lokuba kugxilwe kwiPlasma 5.18
Uluntu lwe-KDE lwenza izinto zokugqibela kwiPlasma 5.17, kodwa eyona nto inomdla kukuba baqale ukusebenza kwiPlasma 5.18.
Uluntu lwe-KDE lusixelela okokuqala malunga nemisebenzi eza kuza kwiPlasma 5.18 kwaye enye yazo ikule tray yenkqubo.
IPlasma 5.17 beta ngoku iyafumaneka, ilungiselela ukumiliselwa kwenguqulo ezinzileyo kwiiveki ezintathu
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-beta yokuqala yePlasma 5.17, lolunye lolona hlaziyo lubaluleke kakhulu kwimeko yemizobo kwimemori.
UKate ubetha iVenkile kaMicrosoft kunye nezinye iindaba ze KDE eziqhubeka nokuqhubela phambili
Kanye njengoko besithenjisiwe, ngenxa yokuba ukusetyenziswa kwe KDE kunye nemali yokuvelisa akuthethi ukuba i-KDE iyeke ukuphucula. Apha sikulethela iindaba ezilandelayo.
Uluntu lwe KDE lukhuphe iiNkqubo-sikhokelo 5.62, uhlaziyo olutsha kwiphakheji yethala leencwadi egqibezela isoftware ye KDE.
IPlasma 5.12.9 ifika ukulungisa i-bugs ezingama-24 eziyaziwayo
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.12.9, ukukhutshwa kwangoko kokulondolozwa kwemeko yemizobo ekhutshwe ngaphezulu konyaka onesiqingatha esidlulileyo.
Umhla wokukhutshwa kwePlasma 5.18 sele uyaziwa: uya kufika ngo-Epreli kwaye uyakuba yinguqulelo yeLTS. Ukuba akukho nto yenzekayo, iya kubetha Kubuntu 20.04.
IWayland, injongo entsha ye KDE emva kokuphelisa ukusebenza kwe KDE kunye nemveliso
Ukusebenza kweKDE kunye nemveliso iphelile, kodwa ungoyiki: I-KDE ineenjongo ezintsha, njengokufudukela eWayland kunye nokuphucula usetyenziso lwayo.
Izicelo ze KDE 19.08.1 ifikile ukuqala ukulungisa iimpazamo kolu luhlu
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-KDE Izicelo 19.08.1, ukukhutshwa kokuqala kokugcina kolu luhlu luza ikakhulu ukulungisa iibugs.
IPlasma 5.16.5, ngoku iyafumaneka kwinguqulelo yesihlanu yolondolozo ngezi zinto zintsha
I-KDE ikhuphe iPlasma 5.16.5, ukukhutshwa kwesihlanu kulondolozo kolu ngcelele olwazisa ezinye izinto ezintsha.
Ezi ndaba ziyaqhubeka nokuqinisekisa ukuba iPlasma 5.17 iya kuba sisindululo esihle
Iyaqhubeka nokuqinisekiswa ukuba i-KDE Plasma 5.17 iya kuba yenye yezona zinto zikhutshelweyo zoLuntu lwe KDE kule minyaka idlulileyo.
Ukufumanisa kuya kufumana uthando oluninzi ePlasma 5.17 ngo-Okthobha u-15
Ukusuka kwinto esinokuyifunda kwiiveki ezahlukeneyo zokuSebenza kweKDE kunye neMveliso, ukufumanisa kuya kufumana uthando oluninzi kwiPlasma 5.17.
Ukufumanisa kuya kuba neenguqulelo ezininzi kwiPlasma 5.17, kubandakanywa ezintathu ezintsha ezityhilwe namhlanje
Iveki yama-84 yokusebenziseka kweKDE kunye nemveliso yokuthetha malunga nezinto ezininzi eziza kwiPlasma 5.17, kubandakanya utshintsho oluninzi kuFumanisa.
Izicelo ze KDE 19.08 ngoku ziyafumaneka. Ezi zezona ndaba zibalaseleyo
I-KDE ikhuphe i-KDE Izicelo 19.08, uhlaziyo lwesibini oluphambili kwisicelo sayo esiza nezinto ezintsha ezinomdla.
I-KDE ikhuphe i-Frameworks 5.61 kwaye, phakathi kwezinye izinto ezintsha, iza neepatches eziyimfuneko ukusombulula ubungozi obufunyenwe kwiPlasma.
Kwaye iindaba ezinomdla uKDE asithembise zona kukuba yonke into iya kuba nembala
I-KDE ityhile inoveli enomdla ethembisa yona kwaye kukuba iintloko zeapps ziyayihlonipha imibala yemixholo. Imibala kuyo yonke indawo!
UKubuntu usixelela ngendlela esinokuzikhusela ngayo kwisiphene sePlasma esandula ukufunyanwa
UKubuntu upapashe isikhokelo esifutshane sokufaka ii-patches ukulungisa isiphene sePlasma esisandula ukufunyanwa.
I-KDE sele ilungisile ukhuseleko lwePlasma. Ipakethi ngoku iyafumaneka kwi-KDE neon kwaye kungekudala kwii-repositories ezisemthethweni
Uluntu lwe KDE lukhawulezile kwaye kungaphelanga usuku lokufumanisa, bakhuphe ii-patches ezininzi ukulungisa isiphoso sePlasma.
Bafumene ukuba semngciphekweni kwiPlasma, kodwa i-KDE sele isebenza kuyo. Okwangoku, oku kuya kufuneka ukunqande
Ubungozi bufunyenwe kwindawo yemizobo yePlasma, kodwa i-KDE sele isebenza kuyo kwaye isinika indawo yokusebenza.
Ukusebenziseka kweKDE kunye nemveliso, iveki yama-82 isibonisa imisebenzi ebaluleke kakhulu ... abangayichazangayo
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neVeki yeveki yama-82 isixelela ukuba iPlasma 5.17 iya kuba sisiseko esikhulu kunye nophuculo olunomdla
IPlasma 5.16.4, uhlaziyo lwesine lokuhlaziywa kolu luhlu ngoku luyafumaneka
I-Plasma 5.16.4 ngoku iyafumaneka, ehambelana nokukhululwa kwesine kolu chungechunge. Kuza ukulungisa iibhugi ezaziwayo.
ILatte Dock 0.9 nantsi, enye indawo yolawulo ye KDE
Inguqulelo entsha yepaneli yeLatte Dock 0.9 isandula ukwaziswa kutshanje, inika isisombululo esihle nesilula ukulawula ...
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neMveliso isixelela ngeveki yama-81 yezinto ezininzi eziphuculweyo kunxibelelwano lwePlasma
Iveki yama-81 yokusebenziseka kweKDE kunye neMveliso isixelela ngotshintsho olunomdla, kubandakanya nokuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi.
IPlasma Mobile iya isiba ngcono kwaye ezi zikrini ze-Nexus 5X ziyayingqina loo nto
Uluntu lwe KDE lukhuphe iifoto zesikrini sePlasma kwiNexus 5X ebonisa ukuba ziqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida.
I-KDE neon kunye neKubuntu: ukufana nokwahluka phakathi kweenkqubo zoLuntu ze KDE
Kule nqaku siza kukuxelela ngumahluko kunye nokufana phakathi kwe-KDE neon kunye neKubuntu, iinkqubo ezimbini zokusebenza ezibonakala ngathi ngabazalwana abahlukeneyo ekuzalweni.
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neMveliso, iVeki yama-80: Izicelo zeKDE zokuLungela i-19.12
Besiqhuba ukusebenziseka kweKDE kunye neMveliso kwiiveki ezingama-80 ngoku, inyathelo elenza iPlasma, i-Desktop, kunye neeNkqubo-sikhokelo ezizodwa.
Izicelo ze KDE 19.08 ngoku ziyafumaneka kwinqanaba le-beta kwaye le yeyona ndlela yokuvavanya
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-beta yokuqala yeZicelo ze-KDE 19.08 kwaye kweli nqaku sikubonisa eyona ndlela yokuvavanya.
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neMveliso, iveki ye-79-Umbala woBusuku usalungisa
Iveki yama-79 yokusebenziseka kweKDE kunye neMveliso ifika neendaba ezinomdla kwaye ziyaqhubeka nokulungiselela umsebenzi woMbala woBusuku, ukukhanya kweKDE ebusuku.
Abayithengisi njengamanye amaxesha, kodwa ii-KDE Izicelo 19.04.3 ngoku ziyafumaneka
Uluntu lwe-KDE lukhuphe i-KDE Izicelo ze-19.04.3, iinguqulelo ezintsha zezicelo zayo esele zifumaneka kwindawo yokugcina izinto ezingasemva.
IPlasma 5.16.3 ngoku iyafumaneka, ifika ngokulungiswa kunye notshintsho oluncinci
Uluntu lwe KDE lukhuphe iPlasma 5.16.3, ukukhutshwa kwesithathu kulondolozo kolu luhlu luza nokulungiswa okuncinci kunye nokulungiswa.
Ukusebenziseka kwe-KDE kunye neMveliso, iVeki yama-78: Ukwahlulahlula kweKonsole ngo-Agasti
Kwiveki ye-78 yokuSebenziseka kweKDE kunye neMveliso basixelela malunga nokukhutshwa okuzayo, okunje ngomsebenzi "wokwahlula" iapps yeKonsole.